जनतालाई चिढाउने कार्यमा सरकार किन दत्तचित्त भएर लाग्छ कुन्नी !? | BikalpaNews.com- the most popular online magazine of Nepal
Home Breaking News जनतालाई चिढाउने कार्यमा सरकार किन दत्तचित्त भएर लाग्छ कुन्नी !?
जनतालाई चिढाउने कार्यमा सरकार किन दत्तचित्त भएर लाग्छ कुन्नी !?
पञ्चायतकालको कुरा हो । हाल बन्द रहेको बाग्लुङ्ग बलेवाको विमानस्थल भर्खर भर्खर मात्र खुलेको थियो । एकजना धुरन्धर विकासवादी अञ्चलाधीशले जनताको श्रमदानबाट बलेवादेखि अञ्चल सदरमुकाम बाग्लुङ्गसम्म मोटरसडक खनाउने कार्यको आरम्भ गरेका थिए । त्यतिबेलासम्म बलेवा विमानस्थल मोटरसडकबाट जोडिएको थिएन र सडकले जोड्ने कुनै सरकारी योजना प्रस्तावित पनि थिएन । त्यो बेला बलेवा–बाग्लुङ्ग मोटरेबल सडक बनाउनु भनेको नदीविनाको पुल बनाउनुजस्तै थियो ।
पानीविनाको पोखरी खन्नुजस्तै थियो । अथवा राणाकालमा मान्छेलाई बोकाएर ल्याइएको मोटरहरु काठमाडौंमा गुडाउने सामन्ती शोखजस्तै थियो । तैपनि जनतालाई प्रतिघर महिनादिनसम्म विनापारिश्रमिक श्रमदान गर्नुपर्ने उर्दी लगाइयो ।
वाध्यताबस बोरामा सामलतुमल बोकेर सडक निर्माणमा सहभागी बन्न आम सर्वसाधारणको लाम लाग्यो । अञ्चलाधीशको सनकले सयौ रोपनी उब्जाउ जमिन खनेर मैदान बनाइयो । कुटो कोदालोले खनेको सडकमा मोटर गुड्ने विश्वास जनतालाई थिएन तर सरकारी “झारा” तिर्नुको विकल्प थिएन । सरकारी आदेश नमान्दा सजायँको भागिदार बन्नु पथ्र्यो ।
कि झारा तिर्नु पथ्र्यों कि जरिवाना ! यतिखेर बलेवा बाग्लुङ्ग जोड्ने मोटरसडक बनेको छ । अञ्चलाधीशको सनकमा सुरु भएको योजना प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त थिएन । त्यसैले नयाँ सडक बनाउँदा उतिखेरको अलानइन्मेन्ट बदल्नु प¥यो । नयाँ रेखाङ्कन गर्नुपर्ने भयो । विना प्राविधिक सर्भे–सर्भेक्षण सुरु गरिएको विकास योजनाले हजारौ मानिसको श्रमदान खेर गयो । सयौंं रोपनी उब्जाउ जमिन चौरमा रुपान्तरण भयो । शासकहरुका यस्ता सनकले सार्वजनिक सम्पत्तिको ठूलो खति निम्त्याउँछन् तर परिणामले भने सनकको औचित्य पुष्टि गर्दैन ।
छिमेकी मुलृुक मेक्सीकाकोे सीमामा कंक्रिट पर्खाल ठड्याउने प्रतिबद्धता गरेर सन् २०१७ मा सत्तारुढ हुन सफल भएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आफ्नो योजनाको औचित्यमा मुलुकलाई सहमत गराउन गाह्रो परिरहेको जस्तो देखिन्छ । “अमेरिकी (स्वेत) फष्ट” भन्ने लोकप्रिय नाराले उनलाई २०१७ को निर्वाचनमा विजयी बनाएको थियो । रोजगारी पाउन मुश्किल हुनथालेको अनुभूति गरेको गोरा अमेरिकी मध्यमवर्गलाई अवैधानिक आप्रवासीहरुले अमेरिकीहरुको रोजगार खोसिरहेको छन् भन्ने ट्रम्पको भनाईले आकर्षित गरेका थियो । ट्रम्पको अविश्वनीय विजयको मुख्य कारण त्यही थियो ।
ह्वाइट हाउसको बसाईको तेश्रो वर्ष सुरु भयो । मेक्सीकोको सीमामा कंक्रिट पर्खाल ठड्याउने योजना अझै प्रारम्भ हुन सकेको छैन । योजना पूरा गर्न नसके पनि सुरु मात्र गर्नसक्दा जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्न थालेको प्रमाणित हुन्थ्यो । कामै सुरु गर्न सकिएन भने जनताको पुनः विश्वास जित्न सकिदैन भन्ने तथ्यले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई यतिखेर वेचैन बनाएको छ ।
हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ पर्खाल योजनाको वाधक बनिदिएको हुनाले उनी संकटमा छन् । आफ्नो योजना फलदायी होस् वा नहोस् निर्वाचनमा पुनः विजयी बन्नका लागि पर्खाल योजना सुरु गर्नैपर्ने वाध्यता बनेको छ । त्यसैले संकटकाल घोषणा गरेर भए पनि पर्खालको लागि बजेट स्थानान्तरण गर्नुको विकल्प ट्रम्पसँग अर्को थिएन । उता विपक्षीहरु ट्रम्पको कदमविरुद्ध अदालतमा जाने भएका छन् । अर्को चुनावमा ट्रम्पको जय पराजयको चाबी अब अदालतको हातमा पुग्ने भएको छ ।
विकासको मूल फुटाउने उद्घोष गरेको पञ्चायती शासनकालमा पनि केही त्यस्तै रोमाञ्चकारी योजनाहरु सुरु भएका थिए र ती योजनाहरुको दुर्गतिको नमुना बलेवा–बाग्लुङ्गको मोटरसडक उउटा मात्र थिएन । त्यस्तै हवाई योजनामध्येको एउटा थियो प्रशान्त महासागरमा नेपाली पानीजहाज चलाउने योजना ! वि.सं. २०२७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पानीजहाज ऐन बनाउन लगाएका थिए ।
वकाइदा ऐन बन्यो, कार्यालय पनि खुल्यो, बजेटको व्यवस्था पनि भयो । पानीजहाजको लागि पेश्की पनि पठाइयो । नेपाली झण्डा टाँगिएको पानीजहाज हिन्दमहासागरमा तैरियो । नेपालले नियमित किस्ता बुझाउन सकेन । जहाज फिर्ता गयो । परिणामतः नेपालको जहाज कम्पनी टाट उल्टिएथ्यो रे !?
हाम्रा स्वप्नदर्शी प्रधानमन्त्रीले केरुङ्–काठमाडौं–पोखरा–लुम्विनी विद्युतीय रेल चलाउने सपना देखे । प्रधानमन्त्रीको सपनाले नेपालीहरुमा आशाको दियो जलायो । “दुई वर्षमै” रेल कुदाइदिने प्रमको गफले जनतालाई उत्साहित बनायो । तर चिनीया रेलको कथा पनि अघिल्लो कार्यकालको “तीन महिनामै काठमाडौंका घरघरका चुलाचुलामा भूमिगत ग्यासका पाइपलाइन जोडिदिने” वाचाजस्तै उडन्ते गफ ठहरिने सम्भावनाले नेपालीहरुलाई निराश बनाएको छ ।
उतिखेर सम्भाव्यतामा प्रश्न उठाउनेहरुलाई “पहिले काम गर्ने अवसर त देउ” भनेर जनताले नै प्रश्नकर्ताको मुख थुन्ने धृष्टता समेत गर्ने गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको हातमा सत्ताको बागडोर परेको एकबर्ष बित्यो । यो एक वर्षमा प्रारम्भिक अध्ययनभन्दा अगाडी रेलको काम बढ्न सकेन । दुई वर्षको अवधिमा त डिटेल सर्भे पनि नसकिने भो । डिटेल सर्भे कहिले गर्ने र त्यसको लागत कसले बेहोर्ने भन्ने विषय टुङ्गिएको छैन । रेलमार्ग बनाइदिने कसले ? रेलका डिब्बा किनिदिने कसले ? उसैपनि समयमै सबै व्यवस्था भयो भने रेलमार्ग तयार हुन अर्को आठ वर्ष लाग्छ रे ?! त्यतिबेलासम्म को कहाँ पुगिसक्ने हो कुन्नी ?
प्रधानमन्त्रीले हतारो गरेर उद्घाटन गरेको पानीजहाजको कार्यालय पनि बन्द भैसक्यो रे ?! अफिस किन खुल्यो ! किन बन्द भयो ? पानीजहाज चलाएरै देखाउने तुजुक पूरा गर्ने हो भने कार्यालय खुलाउनु स्वभाविक थियो । कमसेकम नेपालका नदीहरु पानीजहाज चलाउन उपयुक्त छन्, छैनन, तिनको किनारा र गहिराईमा सुधार गर्दा कहाँसम्म कुन आकारको पानीजहाज चलाउन सम्भव छ भन्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिन्थ्यो ।
पानीजहाज कार्यालयको स्थापना र विस्थापनको कथा पनि ४ दिनमै बन्द भएको काठमाडौंमा सञ्चालन गरिएको विद्युतीय बससेवाजस्तै भयो ? लुम्विनीका लागि झिकाइएका बसको परीक्षण उतै गरेको भए हुँदो हो । परीक्षणको पनि उदघाटन गरेर किन जगहसाँईको विषय बनाउनु पथ्र्यो र ? प्रमको बाहुलीबाट उद्घाटन गराइसकेपछि काठमाडौंका सडकमाहरुमा विद्युतीय बससेवा निरन्तर रहनुपथ्र्यो ।
बसहरु लुम्विनीका लागि झिकाइएको थिए भने पनि सरकारले सट्टाभर्ना दिन सक्दो हो । उसै पनि हाम्रा प्रधानमनव्त्त२ीमा उडन्ते योजना सुनाउने र हवाई गफ दिन रुचाउने केटाकेटी वानी छ । कमसेकम प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेले बोल्दा अलिकता विचार पु¥याउँदा राम्रो हुन्थ्थ्यो । विना सोचविचार प्याच्च बोलिदिने नगर्दा हुन्थ्यो । लौ भैगो प्रधानमन्त्रीले त नानी देखि लागेको वानी छोड्न सकेनन् रे ! कमसेकम सल्लाहकार, सहकर्मी र उच्च धिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ठट्टाको पात्र बनाउने नादानी नगरिदिए हुन्थ्यो ।
यद्यपि सरकारले होइन छैन भनेर विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिसकेको छ तापनि केही अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नाममा यतिखेर निकै लोकप्रिय मानिएको सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रतिबन्ध लगाउने उद्योगमा सरकार लागेको छ भनिन्छ । विज्ञापन व्यवसायहरुलाई करको दायरामा ल्याउनसक्दा देश लाभान्वित हुन्थ्यो । त्यस अर्थमा सरकारको योजनालाई वेठिक भन्न सकिँदैन । तर यतिखेरसम्म नेपाली जनताले निर्वाध उपभोग गरिरहेका सामाजिक सञ्जालहरुले वानी लगाइदिसकेका छन् ।
तिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नेपालीहरुका लागि रुचिकर हुनेछैन । स्वास्थ्यका लागि लाभदायक नै भए पनि मदिरासेवनको कुलतमा लागेको मानिसलाई नसावन्दी अरुचिकर लागेजस्तै जनतालाई सरकारको कदममनपर्ने छैन । अर्कोतिर नेपालजस्तो सानो बजारको लागि ती सामाजिक सञ्जाल व्यवसायहरु दर्ता हुन आइदिने सम्भावना देखिदैन । यदि साँचै ती सञ्जालहरुमा प्रतिबन्ध लाग्यो भने त्यो सरकारका लागि दुर्भाग्य निम्त्याउने कारण बन्ने छैन भन्न सकिन्न । सबै कुरा छोडेर फेसबुक एउटा बन्द हुने हो भने अर्को निर्वाचनमा नेकपालाई धुलो चटाउन अरु कसैले कुनै कसरत गर्नुपर्ने छैन ।
बोलीवचन र कर्मले सरकार किन जनतासँग अन्तर्विरोध सिर्जना गर्ने प्रयत्नमा निरन्तर लिप्त भएको हो कुन्नी ? “केजातिलाई घीउ नपचेको” हो भनिहाल्नु भने लोकगायक पशुपति शर्मालाईजस्तै आरोप लाग्ला कि भनेर तर्सनुपर्ने ?! नवविकल्प साप्ताहिकमा प्रकाशित